UMantashe uvikele obaKwaZulu | IOL Isolezwe
UMantashe uvikele obaKwaZulu
Isolezwe / 26 June 2012, 12:09pm /
Amakhosi ezinye izizwe asola i-ANC ngokunikeza iSilo samaZulu inhlonipho ekhethekile , lapha sithathwe noMengameli wezwe uMnuz Jacob Zuma owayehambele omunye wemicimbi yaso kwaDukuza ephelezelwa amalungu ekhabhinethi kazwelonke
I-ANC ikuvikele ukunakekelwa kwendlunkulu kaZulu ngendlela ekhethekile wuhulumeni ngemuva kokukhalaza kwezinye izizwe ezisola umbuso ngokukhetha iphela emasini.
Izizwe ezikhonondayo zikhala ngokuthi Isilo samaBandla (esisesithombeni) yisona sodwa esithola ukunakekelwa okusezingeni ekubeni zona zihlupheka nokuyimbangela yokuthi amakhosi azo agcine edlula emhlabeni engenalutho.
Isizwe sabaThembu singesinye esikhonondayo kulokhu esikhala ngokuthi i-ANC nohulumeni ewuholayo iwaphethe ngokungefani amakhosi akuleli.
UNobhala-Jikelele we-ANC uMnuz Gwede Mantashe ucashunwe ku-SABC ekhuluma emngcwabeni kandlunkulu wesithathu wesizwe sabaThembu.
Uthe ubukhosi baKwaZulu abufani nobezinye izizwe ngoba bona bubumbene futhi abukaze bubenenkinga yomlando nokwehlukana phakathi njengoba kwenzeka kwezinye izizwe.
“Inkinga ekhona ngalezi ezinye izizwe ukuthi zihlukene kangangokuthi kunzima ukuba uhulumeni akwazi ukuzinakekela ngendlela efana nobukhosi bakwaZulu, ngaphandle kwalokho njengoKhongolose sifuna le nto ilungiseke njengoba kukhona nekhomishana ephenya ngezindaba zobuholi bendabuko,” kusho uMantashe.
Esinye sezizathu ezibekwe uMantashe ukuthi ebukhosini babaThembu buhlukene cishe izindlu eziyisikhombisa ekubeni kwaZulu-Natal kuneNgonyama eyodwa futhi ephuma ngaphansi kobukhosi obunendlu eyodwa.
Kwenzeka lokhu nje ziningi izizwe ezifuna ukulinganiswa nobukhosi bakwaZulu okumanje udaba lwazo lusaphenywa ikhomishana kaTolo ejutshwe uMengameli wezwe.
Eminye imiphumela yalolu phenyo kulindeleke ukuthi ikhishwe ekupheleni kwezothwasa kanti izizwe eziyibheke ngabomvu kubalwa nabaseNhlangwini ngaphansi koMntwana uMelizwe.
Kusabelo mali sika-2012/2013 ubukhosi bakwaZulu buthole isabelozimali sika-R59.5 million kanti le mali izobhekana nezindleko zendlunkulu, abantwana basebukhosini noNdlunkulu.